Arzantina: La Flecha Miara-Miasa Amin’ny Tanora Amin’ny Alalan’ny Fampielezam-Baovaon’Olon-tsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2011 9:36 GMT
Fanamarihan'ny Rising Voices : Nahasarika ny maro maneran-tany ny antsonay farany ho an'ny fisoratana anarana ho an'ireo tetikasa fanentanana ho an'ny fampielezam-baovaon'olon-tsotra. Na dia tsy afaka namatsy tsirairay ireo hevitra tsara rehetra aza izahay, dia te-hanasongadina ny sasany tamin'ireo tetikasa izay manohy manasoa ny fiaraha-monina misy azy amin'ny fampianarana ny hafa ny fomba famoronana fampielezam-baovaon'olon-tsotra. Hiezaka ny hampiseho tetikasa maro araka izay tratra tamin'izy ireny izahay .
La Flecha [es] (Ilay Tsilo) dia fikambanana mitoby any an-tanànan'i Buenos Aires (Arzantina) natsangana tamin'ny taona 2001, izay nanomboka tamin'ny famokarana taratasy zaraina, miresaka momba ny olana amin'ny fandraisan'ny tanora anjara amin'ny fiaraha-monina. Nisy fotoana nandalovan'ny firenena olana ara-toekarena sy sosialy goavana, ary nahatsapa ireo mpanangana ny La Flecha fa tokony hitombo fa tsy hihena ny fandraisana anjaran'ny tanora. Nanomboka tamin'izay dia nivoatra ny tetikasa ary miara-miasa amin'ny tanora any amin'ny fokontany maro any an-tanàna hampianarana azy ireo ny fomba hamoronany ny fampielezam-baovaon'olon-tsotra mba hanombohan-dry zareo sy ny hitaizàny ny adihevitra momba ireo olana hita amin'ny fiainanany andavan'andro.
Amin'ny alalan'ireo fifandraisana efa misy miaraka amin'ny sekolim-panjakàna ao an-tanàna, ny tompon'andraikitry ny La Flecha, ho an'ny tetikasany “Otros con Voz [es]” (Ny Feon'ny Hafa), dia manome fampiofanana ara-javakanto, onjam-peo, ary fakàna sary dizitaly. Mandritry ny hetsika misokatra ho an'ny daholobe no matetika anasongadinana ireo asa novokarin'ny tanora, nefa koa amin'ny aterineto amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy misy. Mavitrika ihany ny tanora amin'ny sehatra tahaka ny Facebook, izay ahafahany mizara ny asany, sariny, ary ny tantara miaraka amin'ireo namany, izay ahazoan-dry zareo valinteny eo noho eo avy amin'ireo tanora hafa mitovy fisainana aminy.
Maro amin'ireo fampiofanana no tantanin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny La Flecha, ary nivarotra akanjo [es] namboarin'ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina ny fikambanana mba hahazoana vola. Manome fanampim-baovao ny La Flecha ao amin'ny bilaoginy [es] momba ireo hetsika vao haingana, izay azo jerena ihany koa amin'ny Facebook, YouTube, ary Flickr.